နိုင်ငံတော်သမ္မတ ကြိုဆိုပွဲအခမ်းအနား သမ္မတအိမ်တော်တွင် ကျင်းပ - Yangon Media Group
နေပြည်တော်၊ မတ် ၃ဝ-နိုင်ငံ တော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်အား ကြိုဆို ပွဲအခမ်းအနားကို မတ် ၃ဝ ရက် နံနက် ၁ဝ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော် ရှိ သမ္မတအိမ်တော် သံတမန်ဆောင် ဧည့်ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ ရှေးဦးစွာ နိုင်ငံတော်သမ္မ ဦးဝင်းမြင့်နှင့် ဇနီးဒေါ်ချိုချိုတို့သည် သမ္မတအိမ်တော်သို့ရောက်ရှိလာ ရာ ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေနှင့် ဇနီးဒေါ်ခင်သက်ဌေးတို့က ကြိုဆို နှုတ်ဆက်သည်။
ဆက်လက်၍ နိုင်ငံတော် သမ္မတနှင့် ဇနီးအား နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်သည်။ ထို့နောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတ သည် သံတမန်ဆောင်ဧည့်ခန်းမ သို့ရောက်ရှိရာ ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေက ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင် နရီဗန်ထီးယူ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ်၊ အမျိုးသား လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင် သန်း၊ ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီး ချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး၊ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၊ ဒုတိယ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီး ချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်း၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ် ချုပ်ကြီး ကျော်ဆွေ၊ ဒုတိယဗိုလ် ချုပ်ကြီး စိန်ဝင်း၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ် ကြီးရဲအောင်၊ ဦးကျော်တင့်ဆွေ၊ ဒေါက်တာဖေမြင့်၊ သူရဦးအောင် ကို၊ ဒေါက်တာအောင်သူ၊ ဦးသန့် စင်မောင်၊ ဦးအုန်းဝင်း၊ ဦးဝင်းခိုင်၊ ဦးခင်မောင်ချို၊ ဒေါက်တာသန်း မြင့်၊ ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး၊ ဒေါက် တာမြင့်ထွေး၊ ဦးဟန်ဇော်၊ ဒေါက် တာဝင်းမြတ်အေး၊ ဦးအုန်းမောင်၊ နိုင်သက်လွင်၊ ဦးကျော်တင်၊ ပြည် ထောင်စုရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းထွန်း ဦးတို့နှင့် မိတ်ဆက်ပေးသည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်က ကြိုဆိုပွဲအခမ်းအနား သို့ တက်ရောက်လာကြသူများ အား နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြား ရာတွင် နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများအကျိုးအတွက် စည်းစည်းလုံးလုံး ညီညီညွတ်ညွတ် ဖြင့်ထမ်းဆောင်သွားကြရန်၊ စိတ် တူကိုယ်တူ တက်ညီလက်ညီပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားကြရန် လိုအပ် ကြောင်း ပြောကြားသည်။
နိုင်ငံတော် သမ္မတနှင့် ဒုတိယသမ္မတများ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နာယကရှေ့မှောက် ကတိသစ္စာခံယူ၊ နိုင?
ရန်ကုန်မြို့လေထု ညစ်ညမ်းမှု သတ်မှတ် စံနှုန်းထက်ကျော်လွန်နေ၊ လေထုအရည်အသွေး တိုင်းတာခဲ့သည့် ??
နိုင်ငံတော် အသိအမှတ်ပြု ဒေသဆိုင်ရာ MSMEs ထုတ်ကုန်ဆုရသူ စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီးမှ လုပ်ငန်းရှင်
ရိုက်တာ သတင်းထောက်နှစ်ဦး အမှုတွင် သက်သေများ ရှာဖွေစစ်ဆေးရာ၌ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် သွေဖည်မ
ထိုင်းနိုင်ငံ ချိုင်နက်ထောင် အဖောက်ခံရ၊ ထောင်သားများကို လိုက်ရှာနေ